Mkpa nke ventilashị nke griin haus – KCvents ventilashion sistemu
Mkpa nke Greenhouse Ventilation
Ọ dị ezigbo mkpa maka onye na-akụ mkpụrụ na ihe ọkụkụ na griin ha na-eto nke ọma.Site na ịgbasa ikuku, a na-emepụta ihu igwe griin haus mgbe niile, na-egbochi ihe ize ndụ nke ọrịa osisi na mmebi mmiri.Nke a nwere ike ime ka ọrụ azụmahịa dị mfe ma mụbaa mmepụta.
Na-akwalite uto ihe ubi site na KCVENTS EC Inline Duct Fan
A na-elelị mkpa ọ dị ezigbo ikuku na mgbasa ozi na griin haus.Otú ọ dị, nke a bụ ihe dị mkpa na mgbagwoju anya nke gụnyere ọtụtụ ihe.E kwuwerị, olee otú ị ga-esi rụọ ọrụ nke ọma ịmepụta ihu igwe griin haus na-agbanwe mmetụta mpụga?
Ahụmahụ anyị ọtụtụ afọ nke bara uru na ọtụtụ ule anwụrụ ọkụ egosila na ndị fan bụ ngwaọrụ dị irè iji nweta uru dị iche iche dị mkpa na griin haus.Dị ka ọmụmaatụ, ibelata iru mmiri metụtara osisi ọrịa na pesti, ma ọ bụ na-enyere ndị ọzọ edo osisi itolite, streamlining azụmahịa ọrụ na-azọpụta ike.
Mgbasa ikuku kwụ ọtọ
Ndị na-ahụ maka mgbasa ozi kwụ ọtọ na-enyere aka ịgwakọta ikuku n'etiti ndị fan na oke ọsọ.Enwere ike ime nke a dịka ụkpụrụ ikuku ventilashị siri dị ma ọ bụ nke yiri ya.Dị ka a akụkụ mmetụta, ikuku n'etiti osisi na-amalite ịkwaga n'ihi airspeed, na nnukwu kehoraizin okpomọkụ dị iche iche bụ itule si.
Ngwakọta kwụ ọtọ nke ikuku site n'enyemaka nke KCVENT Fans na-emepụta ikuku ikuku mgbe niile n'etiti osisi, na-eme ka microclimate na-arụ ọrụ.Na mgbakwunye, onye ofufe na-agwakọta ikuku nke anwụ na-ekpo ọkụ na oyi akwa oyi na ala nke ihe ọkụkụ, na-ewepụ ọdịiche dị n'etiti okpomọkụ na iru mmiri.A na-ejikarị KCVENTS Fans na griin haus ebe a na-enweta uto site na iji ụkpụrụ "Ọgbọ Ọgbọ na-esote".
Belata iru mmiri dị n'ụlọ griin ha site na ikuku ikuku KCVENTS
Iji belata iru mmiri na greenhouses, ikuku ventilashion nwere ike ịbụ ngwọta kwesịrị ekwesị.Site n'enyemaka nke KCVENTS EC inline duct Fans, a na-ewepụta ikuku na-ekpo ọkụ na griin haus, ebe a na-esi na ikuku na-ebufe ikuku kpọrọ nkụ.
Anyị KCVENTS EC Fan inline duct fan nwere okpomọkụ na iru mmiri ihe mmetụta na ngosi nwere ike chọpụta okpomọkụ na iru mmiri dị na griin haus ikuku nke ọma.Emebere ụdị fan ndị a nke ọma maka ụlọ ọrụ griin haus.
Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na: Alibaba .
Ederede ndị emetụtara
Maachị 10, 2022
Kedu otu esi ahọrọ usoro ikuku ventilashị maka ụlọ gị?
Febụwarị 25, 2022
Mkpa nke sistemu ikuku ọhụrụ na mmiri
Febụwarị 18, 2022
Ihe nzacha carbon: Ekwesịrị m iji otu n'ime ime ụlọ eto m?
Jenụwarị 20, 2022
Ihe nzacha ndị ọzọ, ọ ka mma mmetụta nzacha?
Ọnwa Mbụ 14, 2022
Ebe nwụnye na nlezianya anya maka ikuku ikuku n'ụlọ
Jenụwarị 8, 2022
Wụnye KCVENTS Ọhụrụ Sistemụ Ikuku Maka Ụlọ Ọhụrụ
A na-emechi okwu.